Ahụkarị nri nke France | Akụkọ Njem
France ahụkarị nri
Isabel Catalan | | Francia, Gastronomy
Nri French bụ otu ihe dị mma na nzacha. A na-ewere ya dị ka otu n'ime gastronomies kachasị mkpa n'ụwa. Ihe ndi eji eme nri ha bu butter, cheese, herbs, tomato, meats na inine n’ozuzu.
Ọ bụrụ n’ị na-eche ihe ụdị nri nri France bụ, lee ụfọdụ usoro nri kacha mma sitere na ala Gallic nke na-eme ndị mmadụ ara. foodies si n'akụkụ nile nke ụwa.
4 Yabasị ofe
7 Baguettes na chiiz
Ọ bụ nri kpakpando nke ememme ọ bụla dị na France n'ihi na ọ dị mfe ịkwadebe ma ọkụ ma ọ bụ oyi dị ya ụtọ. La Quiche Lorreine Ọ bụ ụdị nri sitere na France, ọkachasị sitere na Lorraine, ma enwere ike ịkwadebe ya na ọtụtụ ihe, agbanyeghị n'ụdị kpochapụwo achicha achicha achicha achicha akpọrọla anụ ezi na cheese Gruyère.
El coq au vin Ọ bụ, na niile puru omume, ndị kasị ama efere na Occitan nri, nke e nationalized dị ka a ahụkarị nri nke France nile ná mba ahụ, ọ bụ ezie na nuances. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji ọbọgwụ ma ọ bụ anụ ndịda na ndịda, ebe ugwu nke Occitania nwere ike iji anụ ndị ọzọ dị ka anụ ehi.
Maka nkwadebe nke ihendori na-atọ ụtọ ọ dị mkpa ịgbakwunye mmanya na-acha ọbara ọbara, ọ bụ ezie na ụfọdụ ụdị dị iche iche na-eji mmanya ọcha. Na mgbakwunye, iji mee ka ekpomeekpo ahụ dị mma ọ dị mma iji tinye ụfọdụ inine dịka yabasị ma ọ bụ toipu na ọbụnadị n'akụkụ ụfọdụ a na-eji ero.
Otu n'ime nri ndị kachasị ewu ewu na nri French. A na-eme uzommeputa a na akwụkwọ nri stewed nke a na-etinyekarị na Provencal herbs na ngwa nri. Stew a sitere na Provence dị ka Manchego pisto, mana ọ na-emecha mmiri. Enwere ike ije ozi ya dị ka ihe izizi ma ọ bụ dị ka ihe ịchọ mma maka anụ na azụ.
N'ihi Disney nkiri ahụ Ratatouille ghọrọ onye ama ama n’ụwa nile. O si na ịbụ mpaghara French nke mpaghara gaa na-egosipụta na ọtụtụ narị akwụkwọ nri mba ofesi.
Nke a bụ otu n’ime efere kachasị mma na nri French n’agbanyeghi na ọ bụ na mbụ ka efere dịkarị n’etiti ezinụlọ ndị dị umeala n’obi. Ihe nzuzo nke nri French a bụ egwuregwu nke uto n’etiti ụtọ nke yabasị agwakọtara site na ofe a na-eme n’ụlọ na cheese gratin.
A na-esi yabasị na bọta na mmanụ nwayọ nwayọ ma otu mgbe a na-etinye ya na efere, tinye otu iberibe achịcha na chiiz na gratin. Nanị irresistible!
Nri nri French nke a bu uzo iji weta isi ala nke mba a na tebụl gị, nke mere na ọ na - aputa ihe na menu nke otutu ulo nri French. Ọ bụ ọdịnala nwekwara ihe ndị dị mma maka ahụike n'ihi na egosila na ihe ọ na-eri kwa ụbọchị na-amasị ndụ mmekọahụ ma na-akwụsị ịka nká nke sel akpụkpọ ahụ.
Escargot pụtara ejula French na ha na-akwado ya na pasili, garlic na butere butter. Otú ọ dị, ha nwekwara ike ịmịchaa ọkụ na galik na yabasị, ma gwakọta ya na salad.
El Boeuf Bourguignon ma ọ bụ anụ Burgundian bụ ụdị nri French ọzọ, nke dị na mpaghara Burgundy. Ọ bụ anụ anụ ụtọ dị ụtọ ebe anụ ahụ na Burgundy na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie iji mee ka ọ dị nro na nke a na-agbakwunye karọt, yabasị, galik na sizinin a na-akpọ bouquet garni.
Mgbe etinyere ihe niile ahụ e kwuru n’elu, a na-etinye butter na butter na butter. Ekele maka nke a, a na-enweta nguzosi ike ahụ.
Baguettes na chiiz
una akpa Ghee nke ọma, ọ bụ nri French nke jikọtara ya na otu cheese, na-ebuga anyị paradaịs n'onwe ya. N'elu okpokoro French ị nwere ike ịchọta ihe karịrị ụdị chiiz 300 ma ndị a bụ ndị ị na-agaghị echefu:
Le Comté, ụtọ na uto
Le Camembert, isi ísì ụtọ na akara nke Normandy
Le Reblochon, dị ezigbo ụtọ ma na-atọ ụtọ
Le Roquefort, otu n’ime chiiz ndị kacha ewu ewu na ụwa
Le Chévre, mmiri ara ehi ewu zuru oke maka salad
Le Bleu, cheese ọzọ na-acha anụnụ anụnụ
Le Brie, na-atọ ụtọ
Otu n'ime nri mba ofesi kachasị ụmụaka na ndị okenye mma. Ihe pancakes A na-eji ntụ ọka emee nke ntụ ọka wit canal, nke a na-eme n'ime diski nke nwere dayameta nke ihe dịka 16 mm. Ọ bụ ezie na a na-erikarị ha dị ka eji megharịa ọnụ na-eji chocolate fondue, cream ma ọ bụ ụdị ihendori ụtọ ọzọ, a ga-eji ihe nnu dị ya rie ha.
Nke a bụ otu n'ime ihe eji eme nri ụtọ na France. Ihe eji mara ya bu na emeputara ihe na ntughari, ya bu, etinye nkpuru osisi na isi ma tinyezi mgwakota agwa. Mgbe etinyere na efere arụ ọrụ, ọ na-atụgharị ya. Ihe nzuzo nke achicha a abụghị naanị na nkwadebe ya kamakwa na mkpụrụ osisi apụl ka ejiri caramelize na bọta na shuga.
Ngwakọta eji megharịa ọnụ nke mba ụwa. Makaron bụ achicha ụdị kuki dị gburugburu, gbachapụrụ agbacha na mpụga ma dị nro n'ime, jiri pasta nke mkpụrụ almọnd anuahade, shuga na akwa ọcha. A na-ebutekarị ha abụọ abụọ site na iji pasta akpọrọ ganache nke ụtọ dị iche iche: vanilla, kọfị, chocolate, pistachios, hazelnuts, strawberries, lemon, cinnamon ...
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, ọ bụ ezie na a na-ewere ya na macarons si France, enwere ndị na-eche na Ntụziaka sitere na Venice na Italytali, n'oge Renaissance na aha ahụ na-enweta site n'okwu ahụ maccherone nke pụtara ezi mado.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Francia » France ahụkarị nri
Ebe kachasị mma iji hụ igwe kpakpando na Spain
Nazaré, ọla nke Portugal